Fanekena maha-mpiandraikitra ao amin’ny SAMPATI, asa vavolombelona ihany koa - Sampana Mpanazava sy Tily - FJKM Tranovato Ambatonakanga
14 juillet 2014 31 juillet 2018
Tsikaritrao ve ireo Alahady, vitsivitsy ao anatin’ny taona, izay mahafeno skoto avy amin’ny fitandremana hafa mamonjy ny fotoam-pivavahana?
Tsikaritrao ve ireo Alahady, vitsivitsy ao anatin’ny taona, izay hanatanterahan’ny SAMPATI fotoana toa hafa kely mandritra ny fotoam-pivavahana ?
Inona marina no tena vontoatin’ireny fotoana ireny ? Midika inona ireny fotoana ireny ho an’ity sampana izay mitonona “hanabe sy hanolokolo” tanora ho olom-banona ity?
« Amin’izao fiantsoana ahy ho mpiandraikitra izao,
dia milaza marina fa azoko tsara sady ekeko
ny zava-kendren’ny Tily eto Madagasikara
Hikely aina tokoa aho hanatanteraka ny andraikitro
amin’ny finoana sy fankatoavana an’i Jesoa Kristy Tompoko sy Mpamonjy ahy
Ny herin’Andriamanitra no iankinako hahatanterahako izany »
Io no fanekena tononin’ilay miroso amin’ny fanekena maha-mpiandraikitra raha ao amin’ny Vondrona Tily. Ndeha anie ho voaboasana io fanekena io e :
« Amin’izao fiantsoana ahy ho mpiandraikitra izao … »
Antso avy amin’Andriamanitra ny fiandraiketana ireo tanoran’ny Fiangonana ao amin’ny Sampana Mpanazava sy Tily. Araka izany dia famaliana antson’Andriamanitra ny firosoana amin’ny Fanekena maha-mpiandraikitra ka izany indrindra no maha-asa vavolombelona azy eo anivon’ny Fiangonana
« …azoko tsara sady ekeko ny zava-kendren’ny fikambanana Tily eto Madagasikara… »
Anisan’ny mampiavaka ny SAMPATI amin’ny sampana rehetra eo amin’ny sahan’ny Fiangonana ny fiankinany amina rafitra roa samy hafa : Ny Fiangonana sy ny fikambanana Mpanazava sy Tily eto Madagasikara (MTEM). Ankoatra ny maha-sampam-piangonana azy mantsy dia tsy azo adinoina fa fikambanana skoto ihany koa ny Sampana Mpanazava sy Tily.
“Hikely aina tokoa aho hanatanteraka ny andraikitro, … Ny herin’Andriamanitra no iankinako hahatanterahako izany”
Manan-janaka ve ianao na efa nahatsapa ny hamafin’ny hoe maha-ray aman-dreny ? Ireo mpiandraikitra ao amin’ny Sampana Mpanazava sy Tily dia tanora vao erotrerony avokoa (manodidina ny 20 taona eo ), mbola tsy manan-janaka nefa dia manao ny andraikitra toy ny an’ny Ray aman-dreny amin’ireo tanora am-polony izay hiandraiketany. Raha ny endrika fifampitondrana dia toy ny zoky izy ireo raha ny marimarina kokoa nefa toa miantsoroka ny andraikitra mavesatry ny ray aman-dreny ihany … indrindra moa any an-dasy. Sahy sy vonona nanolo-tena nefa izy ireo ka na fantatra aza fa tsy ho hahavita raha amin’ny maha-olombelona fotsiny (hery, fotoana, vola aman-karena, ny fianarana etsy an-daniny, …) dia mino kosa fa mitafy ny herin’Andriamanitra amin’ny andraikitra ekeny.
“… amin’ny finoana sy fankatoavana an’i Jesoa Kristy, Tompoko sy Mpamonjy ahy…”
Miteny ho azy ity ampahana fehezan-teny ity, izay toa zary ho fanekem-pinoana ary tena fanekem-pinoana. Tsy azo adinoina mantsy fa sampam-piangonana ny Sampana Mpanazava sy Tily ary fikambanana kristianina ny Mpanazava sy Tily Eto Madagasikara.
Iza no manao ny fanekena maha-Mpiandraikitra?
Araka izany dia misy fepetra vitsivitsy tsy maintsy fenon’ireo “Chefs / Cheftaines” maniry hiroso amin’ny Fanekena maha-mpiandraikitra :
mpandray ny fanasan’ny Tompo (na mpanatona) : satria i Jesoa Kristy no mpaniraka sy mpampiasa ary ny Finoana Kristianina no iorenan’ny asa ho atao.
Efa nahavita ny dingam-piofanana takian’ny foiben’ny MTEM : izany hoe efa mahazo tsara ny zava-kendren’ny fikambanana ary efa afaka mampiatra izany
Efa niandraikitra nandritra ny 2 taona : Izany hoe efa nahita sy niaina ny hamafin’ny fiandraiketana fa indrindra ny hamaminy
Fa indrindra indrindra, izay VONONA : satria antso no valiana ka an-tsitrapo no hirotsahana aminy.
“Ny asa fiandraiketana no asa sarotra indrindra, fa izy koa no asa mamy indrindra”
Ny Alahady 20 jolay ho avy izao, mpiandraikitra 4 indray no hiroso amin’izany dingana lehibe izany ary hatolotra amin’io fotoana io ihany koa ny Tonia vaovao ho an’ny Vondrona Mpanazava.
Hanasana antsika mpianakavy amin’ny finoana hanotrona ny fotoana fa indrindra indrindra hanasana antsika hitondra am-bavaka ny fotoana sy ny andraikitra mavesatra hiantsorohan’izy ireo.
Manana fanontaniana ianao mahakasika io asa vavolombelona io? Mbola misy mahaliana anao mikasika io sampana io? Aza misalasala mametraka fanontaniana
Sampana Mpanazava sy Tily. permalink.